अलैंचीको बजारभाउमा गिरावट आउँदा किसान चिन्तित – NewsAgro.com
अलैंचीको बजारभाउमा गिरावट आउँदा किसान चिन्तित
September 24, 2018 newsagro0Comments अलैंची, अलैंचीको बजारभाउमा गिरावट आउँदा किसान चिन्तित
यो समाचार 316 पटक पढिएको
फिदिम । बगानमा यसपटक अलैंची राम्ररी फलेको छ। अलैंची फलेको हेर्दा किसानलाई अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर उत्पादन होला भन्ने अनुमान छ। तर, बजारभाउमा आएको गिरावटले किसान चिन्तित देखिएका छन्।
‘अलैंची राम्रो फल्यो भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन’, फालेलुङका कुसुम आङ्बोले भने, ‘जति अलैंची फलेको छ, त्यति नै चिन्ता पनि बढेको छ।’ अलैंची उत्पादन बढेसँगै बजारमूल्य घट्ने चिन्ताले किसान पिरोलिएका हुन्। नयाँ अलैंची बजारमा आउन थालेपछि मूल्यमा घटबढ हुन थालेको छ। अलैंचीको भाउ कतिसम्म पुग्छ भनेर अनुमान गर्न नसकिएको अलैंची व्यवसायी संघ पाँचथरका अध्यक्ष खेमनाथ अधिकारीले बताए। ‘अलैंचीको मूल्य अस्थिर छ’, उनले भने, ‘मूल्य अस्थिरताले गर्दा व्यापारीलाई पनि चिन्ता छ।’
अहिले अलैंचीको बजारमूल्यमा गिरावट आएको छ। पाँचथरमा प्रतिमन ३० हजारदेखि ३२ हजार रुपैयाँसम्ममा अलैंची कारोबार भइरहेको छ। एक साताअघिको मूल्यभन्दा झन्डै पाँच हजार रुपैयाँले गिरावट आएको व्यापारीको भनाइ छ। ‘जब अलैंची उत्पादन वृद्धि हुन्छ तब किसानले राम्रो मूल्य पाउँदैन’, याङ्वरकका किसान अमृत योङ्याले भने, ‘अलैंची उत्पादन वृद्धि हुँदा खुसी हुने दिन गए। उत्पादन वृद्धि हुनेबित्तिकै मूल्य खस्किने गरेको छ।’
बजारभाउमा आएको गिरावटले किसान चिन्तित देखिएका छन्।
पछिल्लो समय अलैंची खेतीमा व्यापक वृद्धि भएको छ। खेती विस्तारसँगै अलैंचीको मूल्यमा गिरावट सुरु भएको व्यापारीको अनुमान छ। अलैंचीको आन्तरिक बजार नभएकाले पनि राम्रो मूल्य पाउन छाडेको जनाइएको छ। यहाँ उत्पादन भएको ९० प्रतिशत अलैंची भारतीय बजारमा निकासी हुने गरेको छ। अलैंची कारोबारमा भारतीय बजारको एकाधिकार भएकाले पनि नेपालमा उत्पादित अलैंचीले मूल्य पाउन छाडेको पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दीपक नेपालको भनाइ छ।
‘अलैंचीको व्यापारमा भारतको एकाधिकार तोड्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘भारतीय एकाधिकार नतोडेसम्म अलैंची व्यापारसमेत फस्टाउन सक्दैन।’ अलैंचीको मूल्यमा सुधार ल्याउन तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। पहाडी जिल्लाका किसान अहिले धमाधम अलैंची टिपिरहेका छन्। अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष अलैंची राम्रो फलेको छ।
← सार्वजनिक सबारीको भाडा दर बृद्धि
अब सातै प्रदेशमा कृषि औजार बितरण →
११ उद्योगका घिउ र तेल ‘खान अयोग्य’ !
मह बेचेर लखपति बन्न सकिन्छ
January 22, 2019 newsagro 0
दुग्ध विकास संस्थानको बोर्ड सदस्यमा डा. श्रेष्ठ